Home Wararka Israel oo taageero amni iyo mid sirdoon siinaysa Imaaraadka
Israel oo taageero amni iyo mid sirdoon siinaysa Imaaraadka
Israel ayaa Imaaraadka Carabta u yaboohday taageero amni iyo mid sirdoon oo ka dhan ah weeraro kale oo lagu qaado kadib weerarkii dhimashada lahaa ee Xuutiyiinta ay ku qaadeen Abu Dhabi, waxaa sidaa lagu sheegay warqad kasoo baxday ra’iisul wasaaraha Israel.
Saddex qof ayaa la dilay, lix kalena waa la dhaawacay Isniintii kadib markii saddex booyad oo shidaal ah ay ku qarxeen caasimadda Imaaraadka ee Abu Dhabi.
Afhayeen u hadlay militariga Xuutiyiinta ayaa sheegay in kooxda ay “tiro ballaaran” oo ah diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drone-ka iyo shan gantaal oo ballistic ah ay u adeegsadeen weerarka.
Ra’iisul Wasaaraha Israel Naftali Bennett ayaa weerarka ku cambaareeyey twitter-ka isaga oo ugu yeeray “Weerar Argagixiso oo loo adeegsaday drone.”
Afhayeenkiisa ayaa goor dambe soo saaray warqad tacsi ah oo uu Isniintii u diray hoggaamiyaha dadban ee Imaaraadka, ahna dhaxal-sugaha Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan.
“Waxaan diyaar u nahay inaan kuu yaboohno taageero amni iyo mid sirdoon si aan kaaga caawino inaad shacabkaaga ka badbaadiso weeraradan oo kale,” ayuu Bennett ku qoray warqadda.
“Waxaan ku amray hay’adaha ammaanka Israel inay dhiggooda Imaaraadka Carabta siiyaan kaalmo, haddii aad dooneysaan.”
Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa heshiis uu garwadeen ka ahaa Mareykanka waxay Aqalka Cad kula saxiixdeen Israel 2020, si ay u aas-aasaan xiriir diblomaasiyadeed. Labadan dal ee Khaliijka iyo Israel ayaa Iran u arka cadowgooda guud.
“Israel waxaa ka go’an inay si dhow idiin kala shaqeyso dagaalka aad kula jirtaan xoogagga xagjiriinta ah ee gobolka, waxaana sii wadi doonnaa inaan saaxiib idin kula ahaano ka guuleysashada cadowgeena guud,” ayuu Bennett ku yiri warqadda uu u qoray Sheikh Mohammed.
Bennett iyo Sheikh Mohammed ayaa wada-hadallo ku yeeshay Abu Dhabi bishii December 2021, taasi oo aheyd kulankii ugu horreeyey ee shaacsan ee dhex-mara labada nin.
Previous articleDeni oo Boosaaso u tagaya xalinta khilaafka PSF
Next articleMaxa loo qabtay shirkii GWQ hadaan waxba laga badalaynin boobka doorashada?
Meydka ruux dhalinyaro ah oo lagu arkay Muqdisho
Ruushka oo qarka u saaran in laga mamnuuco cayaaraha caalamka